Allgedo.com » Maxamuud Sayid Aadan oo sheegay in dhawaan ay la wareegi doonaan degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo ee Gedo (Dhageyso).
Home » News » Maxamuud Sayid Aadan oo sheegay in dhawaan ay la wareegi doonaan degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo ee Gedo (Dhageyso). Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Gudoomiyaha gudiga qaban qaabada aagaga dagaalka ee Gobalka Gedo ayaa AOL u sheegay in dhawaan ay la wareegi doonaan degmooyinka Baardheere iyo Buur dhuubo ee gobalkaasi Gedo.
Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in hadda ay dhalatay dowladda cusub sidaa darteedna ay sii wadi doonaan dagaalada ka dhanka ah Al-shabaab.
Dhanka kale waxa uu aad usoo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu sheegay in uu ka rajeynaayo in uu aad u saacido ciidamada dowladda.
Halkaan ka dhageyso Wareysiga Xildhibaan Maxamuud Sayid Aadan.